Die Casting ကိရိယာ - Die Casting မှိုထုတ်လုပ်ခြင်း - ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်း - Minghe Casting
ထုတ်လုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းအမြောက်အများအတွက်မှိုအောင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများလိုအပ်ပါသလား။ ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးအချိန်ကုန်သက်သာသည့်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံသွန်းခြင်းနှင့်မှိုထုတ်လုပ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမမေ့ပါနှင့်။ Minghe တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့ပြေးပုံစံများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောသေတ္တာများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲနိုင်သောအချိန်ကိုပေးသည်။
Die Casting မှိုထုတ်လုပ်မှုကဘာလဲ?
Die-casting ပစ္စည်းများ, die-casting machine နှင့် molds သည် die-casting ထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းသုံးခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ပုံသွင်းခြင်းနှင့်သဘောတူညီချက်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောပုံသဏ္goodာန်၊ အတွင်းပိုင်းအရည်အသွေးနှင့်အတိုင်းအတာများဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောသွန်းလောင်းခြင်းများကိုတည်ငြိမ်စွာ၊ ထိထိရောက်ရောက်ထိထိရောက်ရောက်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဒီသတ္တုသုံးမျိုးကိုအော်ဂဲနစ်နှင့်ပြည့်စုံစွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပင်အရည်အသွေးမြင့် Cast ။ ;
Die- ပုံသွန်းမှို သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုသွန်းလောင်းရန်အတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသေဆုံးသောသတ္တုများပုံသဏ္dieာန်သည်သေသည့်သတ္တုများပုံသဏ္onာန်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုပြီးမြောက်ရန်အတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံသေ၏အဓိကဖြစ်စဉ်မှာ - ပထမ ဦး ဆုံးအမြန်နှုန်းနိမ့်သောသို့မဟုတ်မြန်နှုန်းမြင့်သွန်းသောသတ္တုများမှို၏အခေါင်းပေါက်ထဲသို့ပုံသွင်းခြင်း၊ မှိုသည်ရွေ့လျားနိုင်သောအခေါင်းပေါက်မျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းကိုအရည်ပျော်နေသောသတ္တု၏အအေးပေးမှုဖြင့်ဖိအားပေးသည်။ အလွတ်၏ကျုံ့ဖယ်ရှားပေးသည်။ ချို့ယွင်းချက်ရှိသောချို့ယွင်းချက်များသည်ကွက်လပ်၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကိုအတုပြုလုပ်ထားသောပြည်နယ်အတွင်းရှိကျိုးသောကောက်ပဲသီးနှံများသို့ရောက်ရှိစေသည်။ ကွက်လပ်၏ပြည့်စုံသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများသိသိသာသာတိုးတက်ပါပြီ။
Die Casting မှို၏ဖွဲ့စည်းမှု
ပုံသဏ္(ာန်အစိတ်အပိုင်း (ရွေ့လျားခြင်းနှင့်ပုံသေသော့ဖောင်အမာခံ၊ ပုံသွင်းထည့်ခြင်း၊ အမာခံဆွဲအစရှိသဖြင့်)
မှိုအခြေစိုက်စခန်းအစိတ်အပိုင်း (ရွေ့လျားခြင်းနှင့် fixed မှို splint, AB ဘုတ်အဖွဲ့, pallet, မှိုခြေလျင်)
ရှောင်ကွင်းစနစ် (sprue sleeve, shunt cone၊ cross runner, inlet and outlet)
ထုတ်လွှတ်မှုယန္တရား (ပါးလွှာသောတံတား၊ ပါးလွှာသောတံတိုင်းတပ်ဆင်ခြင်းပြား၊ ထုတ်လွှတ်သည့်အပြား၊ ပြန်လည်လီဗာ)
လမ်းညွှန်အစိတ်အပိုင်းများ (လမ်းညွှန်တိုင်၊ လမ်းညွှန်လက်၊ အလယ်လမ်းအလယ်၊ အလယ်လမ်းလက်)
Core-ဆွဲယန္တရား (core-ဆွဲဆလိုက်ဒါ၊ Oblique guide post, clamping block, spring, etc)
အခြား (အအေးပေးစနစ်၊ အပူပေးစနစ်၊ ကော်လံစသည်)
H13 ရှေ့နှင့်နောက်ခံမှိုခံတပ်ဖွဲ့များအတွက်အဓိက (အပူခံနိုင်သည့်သံမဏိ)၊ အဓိကဆွဲအားအပေါက်များ၊ 45 # သံမဏိ (A, B ပြားများ၊ လျှောများ၊ အကျီင်္တိုင်တိုင်များစသဖြင့်) ။ T8, T10 (လမ်းညွှန်တိုင်များ)၊ လမ်းညွှန်လက်များ၊ A3 သံမဏိ (ရှေ့နှင့်နောက်မှိုအစင်းများ၊
Die Casting မှို၏ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်
မှိုလိုင်ခေါင်းထဲရှိထုတ်ကုန်၏အနေအထားကိုဆုံးဖြတ်ရန်၊ ကွဲထွက်သည့်မျက်နှာပြင်၊ လျှံမှုစနစ်နှင့်လောင်းစနစ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။
သွန်းလောင်းသည့်စက်ကိုပုံသွင်း။ ပုံသွင်း။ အအေးခံစနစ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။
မှိုနှင့်သေသည့် - ပုံသွန်းသည့်စက်၏နှိုင်းယှဉ်မှုအတိုင်းအတာကိုစစ်ဆေးပြီးမှိုနှင့်အပိုင်းတစ်ခုစီ၏ဖြစ်စဉ်ပုံဆွဲပါ။
Excellent ကမျက်နှာပြင် finish ကို။
Die Casting သည် CNC စက်ကဲ့သို့အစဉ်အလာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်ကျသောနှုန်းကိုထုတ်လုပ်သည်။
မော်တော်ယာဉ်၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ အီလက်ထရောနစ်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကားပုံသွန်းခြင်း၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ဦး ဆောင်သောအလင်းရောင်အစိတ်အပိုင်းများသည်အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့်မှိုလုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအွန်လိုင်း - တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးပုံသွန်းလောင်းသောထုတ်လုပ်သူကုမ္ပဏီ
Minghe Casting သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးမှိုထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်ပုံသွင်းထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများဖြစ်သော led light, cooker, automotive die casting နှင့်အခြားအရာများအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများမှာပါးလွှာသောနံရံများ (သို့) ထို့ထက်ပိုသောသေတ္တာသွန်းခြင်းမှိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသွန်းခြင်း၊ သဲသွပ်ခြင်းနှင့် CNC စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဖောက်သည်များ၏သတ်မှတ်ချက်များ၊ ပုံဆွဲခြင်းများနှင့်နမူနာများအရကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်စိတ်ကြိုက်ဈေးသက်သာသည့်လူမီနီယံသေသောသတ္တုများပုံသွန်းသောအပိုင်းများ၊ သွပ်သေတ္တာများနှင့်မဂ္ဂနီစီယမ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်နည်းစနစ်များ၊ မြင့်မားသောကိရိယာတန်ဆာပလာများ အသုံးပြု၍ အရည်အချင်းပြည့်ဝသောဝန်ထမ်းများနှင့်မှိုအစိတ်အပိုင်းများကိုစျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်သေချာစွာပြုလုပ်ထားသည်။ မြန်ဆန်သောကိရိယာတန်ဆာပလာများလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ တင်းကျပ်စွာသည်းခံမှုနှင့်အတူကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုမှိုများကိုပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိအထူးကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့သည်အဆင့်တိုင်းတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ဖြေရှင်းနည်းကိုပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးသင်၏ကိရိယာတန်ဆာပလာများ / မှိုပြုလုပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်စျေးနှုန်းကိုသင့်အား ၂၄ နာရီအတွင်းသင်ပုံသွင်း။ ထုတ်လုပ်သည့်စျေးနှုန်းကိုကိုးကားမည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Die Cast မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်?
မှိုပြုလုပ်သောကုမ္ပဏီများအမြောက်အမြားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်၏ကိရိယာတန်ဆာပလာအဖြစ်အဘယ်ကြောင့် ရွေးချယ်၍ သေစေနိုင်သနည်း။ ဒီမှာအကြောင်းပြချက်များ -
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများကိုပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၃၅ နှစ်ကျော်ကြာသွန်းလောင်းသောမှိုထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံများကိုကြွယ်ဝစွာရရှိခဲ့ပြီးနာမည်ကောင်းရရှိခဲ့သည်။
အမျိုးမျိုးသောသွန်းလောင်းသောမှိုဒီဇိုင်းများနှင့်အမျိုးအစားများ - ပါးလွှာသောနံရံ၊ ဆွဲငင်အား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံသွန်းလောင်းခြင်းနှင့်သဲသောင်ခြင်းများသည်ထုံးစံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျောက်ကိုးကားခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား ၁ ရက်တစ်ရက်တည်းဖြင့်ဆေးသုတ်ခြင်းအမိန့်များကိုတင်ပို့နိုင်သည်။
Die Casting မှိုဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ခြင်း - ပုံသွန်းလောင်းမည့်ပုံကိုဘယ်လိုလုပ်ရမည်
Die Casting အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များစွာရှိသော်လည်း Die Casting မှို၏အစိတ်အပိုင်းဒီဇိုင်းသည်အရေးပါသည်။ ၎င်းကိုမှန်ကန်စွာရယူခြင်းသည်နိမ့်သောဝင်ပေါက်ကုန်ကျစရိတ်၊ ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေး၊ စက်လည်ပတ်ချိန်တိုတောင်းပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်တပ်ဆင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အတွေ့အကြုံရှိသောအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာများ၏ရင်းမြစ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှသေသည့်အထိသွန်းထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုခြစ်ရာမှကူညီရန်သင်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သွန်းသောမှိုဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာများသည် SOLIDWORKS, PRO ENGINEER, UNIGRAPHICS နှင့် MOLD FLOW ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုသော CAD, CAE, CAM နှင့်ပုံဆွဲရန်အထူးပြုသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Die Casting မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများ
Minghe Casting သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသမားရိုးကျရော Multi-Slide Die Cast တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပါထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အခြားအရာများအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများသည်စီမံကိန်းကိုအစောပိုင်းတွင်ပါ ၀ င်ပါက၎င်းသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကိရိယာတစ်ခုနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးသည်စီမံကိန်းအဆင့်အားလုံးတွင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုရရှိသည်။ ယနေ့ကိုးကားရန်တောင်းဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ပုံသေပြုလုပ်နည်း (၇) ခု：
အဆင့် ၁ - ကုန်ပစ္စည်း DFM & မှိုဒီဇိုင်း
အဆင့် ၂ - သံမဏိနှင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူခြင်း
အဆင့် ၃ - CNC စက်
အဆင့် 4: အပူကုသမှု
အဆင့် ၅: ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ခြင်း၊ EDM၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊
အဆင့် ၆: မှိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း
အဆင့် ၇: သန့်စင်ဆေးကြောပါ
Multi-Slide & သမားရိုးကျ Die Casting: Minghe Casting တွင်အမျိုးမျိုးသောဆလိုက်နှင့်သမားရိုးကျကိရိယာတန်ဆာပလာနှစ်မျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာများသည်စီမံကိန်းတစ်ခုစီအတွက်မည်သည့်ကိရိယာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်၎င်းကိုပြုပြင်ရန် (သို့) လွယ်ကူစေရန်လိုအပ်ခြင်းရှိသလား။ အဆိုပါ undercut အနေအထားကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ရှိမရှိ။
ပုံသဏ္andာန်နှင့်အနေအထားသည်းခံစိတ်နှင့်မှိုဒီဇိုင်း၏ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ အကယ်၍ ဂျီ ometric မေတြီသည်းခံမှုရှိပါက၎င်းတို့ကိုရှေ့မှိုသို့မဟုတ်နောက်ခံမှိုသို့မဟုတ်အတန်း၏အဆုံးကဲ့သို့သောပုံစံ၏တူညီသောအခြမ်းတွင်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားပါ။
ထုတ်ကုန်မူကြမ်းထောင့်နှင့် R ကိုထောင့်အတည်ပြုချက်။
ထုတ်ကုန်သည်းခံစိတ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်လိုအပ်ပါသလား။ အဆိုပါစက်အနေအထားစက်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ဖြစ်စဉ်ကို positioning ကိုစက်ကိုတိုးမြှင့်ပါသလား?
Post-processing သည် stamping လုပ်ရန်လိုအပ်လျှင် stamping die positioning point ရှိမရှိရှိပါသလား။
ထုတ်ကုန်၏အပြောင်းအလဲareaရိယာကိုရိုးရှင်းစေနိုင်ခြင်းရှိမရှိ၎င်းကိုမှိုမှတိုက်ရိုက်ပြုလုပ်သည်။ ဥပမာ - ထောင့်မှရှောင်ရှားရန်အပေါက်၊ ကြိတ်ခွဲစက်ကြီးသည်ထောင့်ကိုမသန့်ရှင်းနိုင်ပါ။
ထုတ်ကုန်၏ကော်နို့တိုက်ကျွေးရေးအနေအထားနှင့်ထုတ်ကုန်၏ nozzle ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိ၊ မရှိဖြတ်တောက်ရန်လွယ်ကူခြင်းရှိ၊ မရှိကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်။
slag အိတ်အနေအထား၏ဒီဇိုင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်နှင့်သူကကြိတ်ခြင်းနှင့် polishing များအတွက်အဆင်ပြေခြင်းရှိမရှိရှိမရှိ။
ထုတ်ကုန်၏ပါးလွှာသောအနေအထားသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိမရှိ၊ ၎င်းသည်ထုတ်ကုန်၏ပုံပန်းသဏ္affectာန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမလား၊ ချုပ်ထားသောအမှတ်အသားများ၊ ထိပ်ဆုံးအထုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်ပုံဆွဲရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ、 မှိုထုတ်လုပ်ခြင်း (သို့) နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသောနောက်ဆုံးပေါ်သွန်းလောင်းခြင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Minghe Die Casting ကုမ္ပဏီသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းများ၊ ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အကောင်းဆုံးဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
မှို Cooling အကြံပြုချက်များ (Front မှို)
မှို Cooling အကြံပြုချက်များ (နောက်ကျောမှို)